မာလာအသားကင်ရှယ်ကောင်းတဲ့ ရွှေကျိုင်းဟုန် ? – FoodiesNavi
အသားကင်ဆိုတာမျိုးက ဘယ်လောက်စားစားမဝနိုင် ရိုးအီမသွားနိုင်တဲ့အစားအစာမျိုးရယ် ? အသားကင်မှန်သမျှက အရသာဝင်အောင်နှပ်ထားပေမယ့် အက်မင်ကတော့ အရသာရှိနေရုံနဲ့တင်မကျေနိုင်သေးဘူးကွယ် ? အက်မင်နာမည်ကို မာလာလို့ပြောင်းရလောက်အောင် ဘာပဲစားစားမာလာအရသာတောင့်တနေတတ်တဲ့ မာလာအသည်းစွဲလေးအတွက်ကတော့ အကင်ကိုတောင်မာလာအရသာလေးပဲ စားချင်တာရယ် ? ဒီတော့ အက်မင်နဲ့ရင်ဘတ်ချင်းရော ခံတွင်းချင်းရောတူတဲ့ အစားတစ်လိုင်းတို့ကို အက်မင်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ မာလာအသားကင်ဆိုင်လေးကို ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်နော်။
ဆိုင်နာမည်လေးက ” ရွှေကျိုင်းဟုန်” အစားတစ်လိုင်းတော်တော်များများ သိကောင်းသိနိုင်ပေမယ့် မသိသေးတဲ့သူတွေကိုလက်တို့နိုင်ဖို့ ဖောက်သည်ချပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးက မာလာအသားကင်တွေနဲ့ ရှမ်းအစားအစာတွေကို အဓိကထားရောင်းချပေးတာပါ။ ? အကင်တွေအနေနဲ့ကတော့ ဝက်သားချောင်း ၊ ဝက်ပါးသား ၊ ဝက်အူချို ၊ အူမကြီး ၊ အသဲ ၊ အမဲသား(၂)မျိုး ၊ ငါး(၂)မျိုး ၊ ကြက်ပေါင် ၊ အသဲအမြစ် ၊ တောင်ပံ ၊ ကြက်ကောင်လုံးကင်စတာတွေနဲ့ အသီးအရွက်(၁၆)မျိုးလောက်ရတယ်။ အသားကင်တွေအကုန်လုံးက မာလာအရသာတွေစိမ့်ဝင်နေပြီး အိအိစက်စက်လေးနဲ့ နူးညံ့ကျစ်လျစ်နေတော့ စားလို့ကောင်းဝါးလို့ကောင်းပဲ ? ? ရှမ်းအစားအစာတွေအနေနဲ့ကတော့ မာလာဟင်း ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ၊ သင်္ဘောသီးထောင်း ၊ မာလာအာလူးချောင်းကြော်စတဲ့အမယ်ပေါင်း (၁၇)မျိုးလောက်ရတယ် ? အရသာတွေကလည်း ဂွတ်ရှယ်ပဲ။
ဈေးနှုန်းတွေကလည်း အသင့်အတင့်လေးတွေဆိုတော့ ဘတ်ဂျတ်သိပ်တွက်နေစရာမလိုဘူးရယ် ? ဒီရက်ပိုင်းသွားစားမယ်ဆိုရင်တော့ “ရွှေကျိုင်းဟုန်”ရဲ့ ရက်”၁၀၀”ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဇွန်လ(၄)ရက်နေ့ကနေ (၁၄)ရက်နေ့အတွင်း ညနေ(၄)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီကြားသွားစားရင် ဘာစားစား ၂၀% Discount ရှိသေးတယ်တဲ့ အစားတစ်လိုင်းတို့ရေ ? ဆိုင်လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၆၆/A) ၊ ဆရာစံလမ်း ၊ ဆရာစံမြောက် ၊ အနောက်ရပ်ကွက် ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ပါ။
Image Source: www.facebook,com/ရွှေကျိုင်းဟုန်
ပင်စိမ်းနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ဝက်သားရဲ့ချိုမြမြအရသာလေးကို တွဲဖက်အရသာခံနိုင်မယ့် ဝက်ပင်စိမ်းဟင်း